Wakaaladda Qurba-Jooga Oo Warbixin Ka Soo Saartay Xaaladda Abaaraha Gobolada Bariga Somaliland – Wargeyska Saxafi
Wakaaladda Qurba-Jooga Oo Warbixin Ka Soo Saartay Xaaladda Abaaraha Gobolada Bariga Somaliland
Hargeysa, Somaliland, December 10, 2016 (Saxafi) – Wakaaladda Qurba-Jooga Somaliland ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland, ayaa warbixin ka soo saartay Xaaladda Abaaraha ka jira Gobolada Bariga Somaliland, kadib markii ay hawl-gal kormeer iyo qiimayn ah ku soo mareen deegaanada abaartu ka jirto.
Warbixintaas oo uu ku soo saxeexan yahay Guddoomiyaha Wakaaladda Qurba-jooga Somaliland Cabdi Cabdullaahi Xirsi (Dayaxweerar), ayaa waxay u qornayd sidan:
“WAR-BIXIN KOOBAN XAALADDA ABAARTA GOBOLLADA BARIGA SOMALILAND
Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland ee Wasaaradda Arrimaha Debadda JSL
Bismillaahi Raxmaani Raxmiin
Marka hore waad salaamantihiin Asaalama Calaykum WA Raxma Tullaahi WA Barakaatuhu
Waxannu warbixintan kooban uga diyaarinnay bulshada inaanu kaga hadlo waxyaabihii aannu ku soo aragnay iyo natiijada nooga soo baxday hawlgal kormeer iyo qiimayn ahaa oo aannu Xafiis ahaan ku eegaynay saamaynta taban ee xaaladda abaartu ku yeelatay bulshada, dad iyo duunyaba gaar ahaan deegaannada gobollada bariga.
Ujeedada kormeerkayagu waxay ku qotontay laba qodob oo kala ahaa qiimaynta abaarta iyo xoojinta qayla dhaanta gurmadka abaaraha ee gaar ahaan doorka qurbajoogga iyo qodobka labaad oo ahaa xog ogaal u noqoshada iyo qiimaynta waxqabadka iyo waxtarka qurbajoogga ee adeegyada deegaannada iyo degmooyinka qaarkood.
Waxannu la kulannay gudiyada bulshada, odayaasha iyo guud ahaan dadka hormoodka u ah deegaankasta iyo wargaleenka iyo xoola dhaqatada lafteeda waxanay noo xaqiijiyeen in xaaladda xooluhu isugu jiraan wax baxayba, wax aan soconayn oo aan biyaha gaadhayn oo fadhiya iyo wax weli soconaya balse aan cad iyo caano midna lahayn oo aan iib galayn. Dhammaan deegaannada iyo degmooyinka aan soo marray ee gobollada saaxil, Sanaag, Togdheer, Saraar, Sool, Daad Madheedh iyo Maroodijeexba waxay bulshada ku dhaqani ahaayeen dad 100% dhaqaalahooda iyo noloshoodu ku xidhantahay xoolaha nool iyo waxsoosaarka xoolaha haddii ay qashaan, maalaan iyo iibsadaanba oo aan waxsoosaar kalena lahayn. Sidaa darteed, markii abaartani ku habsatay ee xoolihi sidan noqdeen, waad qiyaasi kartaa xaaladda dadkuna siday noqonayso iyo warwarka ay leedahay. Waxay u baxeen xooluhu inta u dhaxaysa 30% illaa 80% iyo weliba ka badan. Waxannu aragnay ninka 100 neef oo adhi ah oo ka sii haya laba neef, mid 200 ama 300 ama 400 lahaa oo kala badh ama seddex dalool meel iyo ka sii yarba meelaha qaar sii haya waxa soconaya. Waxay xaaladdu markaas taagantahay badbaadinta dadka oo kaliya. Waxa meelaha qaar gaar ahaan gubanka dhintay oo abaartu dishay xawayaankii kale ee duur joogta ahaa sida deeradii, daayeerkii iwm, waxanay dadka ceelasha ka cabbaa ka cabsi ka qabeen in biyuhu sumoobaan.
Degmooyinka badankooda waxa ku soo kordhay dad jihooyin kala duwan kaga soo hayaamay abaarta darteed halka kuwii deganaana qaarkood ama badankoodu meelo kale u hayameen ama waydaarteen kuwa ku soo guuray. Waxay dadku ku magacaabayeen abaartan inay tahay Abaartii Isu Guurka oo tusaale qofkii Sool joogay u hayaamay Sanaag ama Saaxil, oo kii Saaxil u hayaamay Sool ama Awdal oo kii Sanaag u yaamay Gabiley. Deegaannada ugu badan ee dadka xoola dhaqatada ahi kuu soo hayeemn waxay u badanyihiin gobolka Daad Madheedh, degmooyinka Qoryaale, Ballidhiig, Huluul iyo Ceel-Afweyn.
Sida ay nooga warbixiyeen dadka deegaannada aannu soo marray ee gobolkasta waxa ka jirta xaalad cunto yaraaneed. Illaa 60% ayaa deegaannadaas 80ka ka badan ee aannu soo marray la gaadhsiiyay woxoogaa raashin ah mar 1-2 laba balse aanay waxka badan kiilooyo u helin qoysasku, isla markaana aanay boqolkiiba inta badan wada helin ama deegaannada qaarkood waxba gaadhin. Deegaannada dadku u badanyihiin xoola dhaqatada ku baahsan kaymaha iyo buurahaha sida gobolka Daad Madheedh iyo Sanaag waxay gudiyada gurmadka abaaraha ama gobollada iyo degmooyinku ka warwarsanaayeen sida loo meel la isugu ururin karo dadkaas filqan ee xoola dhaqatada ah taasoo uga baahan in gacan laga siiyo
Deegaannada iyo degmooyinka aannu soo marray waxa doorka qurbajoogga ee xagga dhismaha iyo horumarinta adeegyada bulshadu ugu liitaa dhulka gubanka Saaxil iyo Sanaag iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo aanay saamayn togan ah ku lahayn dhammaan adeegyada aas’aasiga ah ee bulshada sida waxbarashada, caafimaadka iwm. Haseyeeshee, waxa jira deegaanno ama degmooyin ay qurbajooggu waxqabado dhaxalgal ah ka sameeyeen gaar ahaan xagga waxbarashada iyo caafimaadkaba meelaha qaar oo ay ka midyihiin degmooyinka Qoryaale, Ballidhiig, Xaaji Saalax iyo Adhicadeeye ee gobollada Togdheer, Daad Madheedh iyo Sool iyo degmada Sabawaang ee gobolka Maroodijeex. Waxannu ku haynnaa xogta qurbajoog iyana mashaariic la mid ah ka hirgeliyay deegaanno ka tirsan gobollada Saaxil, Maroodijeex iyo Awdalba. Dabcan iyana waan booqanaynaa kormeerkayaga labaad, waxanay dhammaan waxqabadkaas qurbajooggu ka muuqan doonaan warbixin gaar ah oo Wakaaladdu ka soo saarayso arrintaas. Waxa bogaadin mudan shakhsiyaad qurbajoog ah oo dhawr deegaan gaadhsiiyay gurmad raashin sida Dhuur Cillaan, Fadhigaab iyo deegaan Durruqsi ka tirsan, waana mid ku dayasho mudan is xilqaanka iyo dadaalka shakhsiyaadkaasi haddii ay jeebkooda tahay iyo haddii ay dad iyo meelo kale ka soo ururiyeenba.
Gebogebadii, waxan marka hore Ilaahay ka baryayaa inuu innaga jabiyo abaartan oo raxmadiisa ballaadhan innoo shubo.
Dawladda Somaliland iyo dalkeennu itaalkasta oo uu leeyahay hadana dadaalka xukuumadda, goleyaasha kale, axsaabta, gudiyada gurmadka abaaraha iyo guud ahaan ee xagga gurmadka abaaraha jira ee biyo dhaanka iyo quutal daruuriga kaleba waa mid socda oo aanay hayn la’aan mooyaane marnaba hagrasho ka muuqan. Waxa xusid mudan mashaariicda qodista riigaga biyaha ee dawladdu ka bilawday deegaannada abaaraysan qaarkood hadda laga cabbayo qaarna lagu rajo weynyahay oo aannu soo aragnay.
Waxan ugu baaqayaa qurbajoogga jaalliyadaha Somaliland meelkasta oo ay joogaan inay xoojiyaan doorkooda waxtarka leh oo si weyn maanta u muujiyaan dareenka wadaniyadda, walaalnimada, wadajirka iyo waxqabadka lahaa ee waligood caanka ku ahaayeen inay dadkooda hiil iyo hooba la soo garab istaagaan oo si waafi ah uga soo qaybgalaan gurmaka abaaraha lagu badbaadinayo nolosha dadkeenna abaaraysan inaanay u dhiman gaajo iyo harraad.
WA BILLAAHI TAWFIIQ”
December 10, 2016 December 14, 2016 Wargeyska SaxafiAbaaraha, Wakaaladda Qurbajoogga Somaliland, Warbixin
Previous Previous post: Xisbiga KULMIYE Oo 26 Masuul U Magacaabay Maamulka Degmooyinka Gobolka Maroodi-Jeex
Next Next post: “Gaboosaba Waakii Ku Biiray Isagoo La Col Ahaa Cirro, Anna Haddaan Ku Biirro Muuse Dee Gaallo Kumaan Biirin”Jamaal Cali Xuseen